Cristiano Ronaldo oo miiska shirka jaraa’id ka fogeeyay cabitaanka Coca Cola…(Miyey UEFA ka jawaabi doontaa?) – Gool FM
(Budapest) 15 Juun 2021. Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa dalbaday in laga fogeeyo dhalooyinka Coca Cola miiska shirka jaraa’id ee uu kaga hadlayay ciyaarta caawa xulkiisu la balansan yahay xulka Hungary.
Laacibka kooxda Juventus ayaa ku ad-adag xirfadlennimada kubadda cagta, waxaana uu dhowr jeer shaaciyay inuusan jecleyn cabitaannada qabow sidaas darteedna uu iska fogeeyo mar walba.
Ronaldo ayaa intuusan gudo gelin shirkiisa jaraa’id waxaa hortiisa ka leexiyay dhalooyinka cabitaanka Coca Cola isagoo taas baddelkeeda gacanta kusoo qabsaday biyo caadi ah, waxaana uu yiri: “kuwan ayaa ka wanaagsan”.
36-sano jirka shanta jeer heysta Ballon d’Or ayaa wareysiyo kala duwan ku caddeeyay inuusan jecleyn cabitaannada qabow sida Coca Cola, waxaana mid ka mid ah wareysiyadaas uu kun sheegay inuu wiilkiisa kula dagaallo ka joojinta cabitaannada aanan caafimaadka badan lahayn.
Illaa iyo haatan, ma cadda waxa uu xiriirka UEFA ka dhihi doono dhacdadan, hase ahaatee, waxaa loo arkaa mid iska sahlan oo aysan wax ka soo qaadin.
Horudhac: France vs Germany... (Kulanka ugu weyn wajiga koowaad ee wareegga Guruubyada oo caawa xiddigo waaweyn kulminaya)